Social Media ဘယျကစတငျခဲ့သလဲ ? -
Social Media အသုံးပွုမှုတှငျကယျြလာတာနဲ့အမြှ စီးပှားရေးလုပျငနျးရှငျတှဟော မိမိတို့လုပျငနျးတှကေို Social Media ကိုအသုံးပွုပွီး ဈေးကှကျထိုးဖောကျနကေပြါပွီ။ဒါကွောငျ့ Social Media ဘယျလိုစတငျပျေါ ပေါကျခဲ့သလဲဆိုတာ ဖျောပွပေးပါမယျ။ Social Media Channel တှဟော 2000 ခုနှဈလောကျကထဲ ကစ တငျပွနျ့နှံ့လာပွီးယခုအခြိနျမှာတော့လူတှဟော ပမျြးမြှ ၁၃၅ မိနဈလောကျအခြိနျကို Social Media Channel တှဖွေဈတဲ့ Facebook ,Instagram,Twitter စတာပျေါမှာနစေ့ဉျကုနျဆုံးကတြယျလို့ ဆိုပါတယျ။ ယခုအခြိနျမှာ Social Media Channel တှမေရှိရငျမဖွဈတော့တဲ့အခွအေနထေိ တိုးတကျလာပါတယျ။
အဆိုပါ Social Media စတငျခဲ့တာဟာလှနျခဲ့တဲ့နှဈပေါငျး ၂၀ ခနျ့ထဲကပါ။၁၈၄၄ ခုနှဈကထဲက Simual Morse ဆိုသူဟာ Social Media နဲ့ပကျသကျတဲ့ခွလှေမျးအစဖွဈတဲ့အကွံအစညျအခြို့ကို Telegraph ဖွငျ့ Washington DC ကနေ Baltimore ကိုပေးပို့ခဲ့ပါတယျ။ ၁၉၆၉ ခုနှဈမှာတော့ ARPN ဆိုတဲ့အဖှဲ့ အစညျးဟာလညျး Social Media အတှကျအကွံအစညျအခြို့ကိုကွိုးစားခဲ့သျောလညျး မအောငျမွငျခဲ့ပါဘူး။
၁၉၉၇ မှာတော့ Six degressလို့ချေါတဲ့ပထမဆုံး Social Site တဈခုပျေါပေါကျခဲ့ပွီး User ပေါငျး ၁ သနျးခနျ့ Profile တှဖေနျတီး Friend ပွုလုပျလို့ရခဲ့ပွီး ၂၀၀၁ ခုနှဈအထိအသုံးပွုခဲ့ကပြါတယျ။ ၁၉၉၉ ခုနှဈမှာတော့ အတှေးအချေါတှေ ထငျမွငျခကျြတှေ ရေးတဲ့ Blog တှပေျေါပေါကျလာပါတယျ။ ၂၀၀၃ ခုနှဈမှာတော့ LinkedIn ဟာ User တှအေတှကျ Resume နဲ့ Private Message တှအေသုံးပွု လို့ရအောငျပွုလုပျခဲ့ပါတယျ။
၂၀၀၄ ခုနှဈမှာတော့ Google ကသူရဲ့မူပိုငျ Email Service ဖွဈတဲ့ Gmail ကိုဖနျတီးခဲ့ပါတယျ။၂၀၀၄ ခုနှဈမှာတော့ Facebook ကို Mark Zuckerberg ကသူ့ရဲ့ Harvard တက်ကသိုလျကအခနျးဖျောသူ ငယျခငျြးတှနေဲ့တီထှငျခဲ့ပါတယျ။ အစပထမမှာတော့ Harvard တက်ကသိုလျကြောငျးသားတှေ အဖို့သာ တီထှငျခဲ့ပမေဲ့နောကျပိုငျးမှာ ကမ်ဘာ တဈဝှမျးအထိပွနျ့နှံ့ခဲ့ပွီး ၁၄ နှဈအတှငျး ၂.၂ ဘီလီယံကြျော User တှရေရှိခဲ့ပါတယျ။ ၂၀၀၅ ခုနှဈမှာတော့ Video တှကေို Upload နဲ့ Share လုပျနိုငျတဲ့ Youtube ပျေါပေါကျလာပါတယျ။ ၂၀၀၆ ခုနှဈမှာပျေါပေါကျခဲ့တဲ့ Myspace ဆိုတဲ့ Social network ဟာ US မှာတော့ အဆိုပါနှဈမှာအလှနျရပေနျးစားခဲ့ပါတယျ။
ဒါပမေဲ့ ၃ နှဈပမာဏလောကျသာပါပဲ။အဲ့နောကျမှာတော့ ၂၀၀၆ ခုနှဈဇူလိုငျလ မှာ Twitter ပျေါပေါကျလာပါတယျ။ ၂၀၁၀ ခုနှဈမှာတော့ Instagram ပျေါထှကျလာပါပွီ။ ၂၀၁၁ ခုနှဈမှာ Image messaging application ဖွဈတဲ့ Snapchat ပျေါပေါကျလာပွီး ယခုအခြိနျထိရပေနျးစားဆဲပါ။ ၂၀၁၈ ခုနှဈမှာတော့ Virtual Reality, Live Video နဲ့ 360 Degree Video အပွငျအခွားသော Video Content တှဟော Social Media Channel တှဖွေဈတဲ့ Facebook, Twitter နဲ့ Instagram တို့မှာ ရပေနျးစာလာ ပါတယျ။ နောငျအနာဂတျမှာလဲ ဘယျလို Social Media Channel တှပေျေါထှကျလာဦးမလဲ စောငျ့ကွညျ့ကရြဦးမှာပါပဲ။
Social Media ဘယ်ကစတင်ခဲ့သလဲ ?
Social Media အသုံးပြုမှုတွင်ကျယ်လာတာနဲ့အမျှ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေဟာ မိမိတို့လုပ်ငန်းတွေကို Social Media ကိုအသုံးပြုပြီး ဈေးကွက်ထိုးဖောက်နေကျပါပြီ။ဒါကြောင့် Social Media ဘယ်လိုစတင်ပေါ် ပေါက်ခဲ့သလဲဆိုတာ ဖော်ပြပေးပါမယ်။ Social Media Channel တွေဟာ 2000 ခုနှစ်လောက်ကထဲ ကစ တင်ပြန့်နှံ့လာပြီးယခုအချိန်မှာတော့လူတွေဟာ ပျမ်းမျှ ၁၃၅ မိနစ်လောက်အချိန်ကို Social Media Channel တွေဖြစ်တဲ့ Facebook ,Instagram,Twitter စတာပေါ်မှာနေ့စဉ်ကုန်ဆုံးကျတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ယခုအချိန်မှာ Social Media Channel တွေမရှိရင်မဖြစ်တော့တဲ့အခြေအနေထိ တိုးတက်လာပါတယ်။
အဆိုပါ Social Media စတင်ခဲ့တာဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း ၂၀ ခန့်ထဲကပါ။၁၈၄၄ ခုနှစ်ကထဲက Simual Morse ဆိုသူဟာ Social Media နဲ့ပက်သက်တဲ့ခြေလှမ်းအစဖြစ်တဲ့အကြံအစည်အချို့ကို Telegraph ဖြင့် Washington DC ကနေ Baltimore ကိုပေးပို့ခဲ့ပါတယ်။ ၁၉၆၉ ခုနှစ်မှာတော့ ARPN ဆိုတဲ့အဖွဲ့ အစည်းဟာလည်း Social Media အတွက်အကြံအစည်အချို့ကိုကြိုးစားခဲ့သော်လည်း မအောင်မြင်ခဲ့ပါဘူး။
၁၉၉၇ မှာတော့ Six degressလို့ခေါ်တဲ့ပထမဆုံး Social Site တစ်ခုပေါ်ပေါက်ခဲ့ပြီး User ပေါင်း ၁ သန်းခန့် Profile တွေဖန်တီး Friend ပြုလုပ်လို့ရခဲ့ပြီး ၂၀၀၁ ခုနှစ်အထိအသုံးပြုခဲ့ကျပါတယ်။ ၁၉၉၉ ခုနှစ်မှာတော့ အတွေးအခေါ်တွေ ထင်မြင်ချက်တွေ ရေးတဲ့ Blog တွေပေါ်ပေါက်လာပါတယ်။ ၂၀၀၃ ခုနှစ်မှာတော့ LinkedIn ဟာ User တွေအတွက် Resume နဲ့ Private Message တွေအသုံးပြု လို့ရအောင်ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။
၂၀၀၄ ခုနှစ်မှာတော့ Google ကသူရဲ့မူပိုင် Email Service ဖြစ်တဲ့ Gmail ကိုဖန်တီးခဲ့ပါတယ်။၂၀၀၄ ခုနှစ်မှာတော့ Facebook ကို Mark Zuckerberg ကသူ့ရဲ့ Harvard တက္ကသိုလ်ကအခန်းဖော်သူ ငယ်ချင်းတွေနဲ့တီထွင်ခဲ့ပါတယ်။ အစပထမမှာတော့ Harvard တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေ အဖို့သာ တီထွင်ခဲ့ပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာ ကမ္ဘာ တစ်ဝှမ်းအထိပြန့်နှံ့ခဲ့ပြီး ၁၄ နှစ်အတွင်း ၂.၂ ဘီလီယံကျော် User တွေရရှိခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၀၅ ခုနှစ်မှာတော့ Video တွေကို Upload နဲ့ Share လုပ်နိုင်တဲ့ Youtube ပေါ်ပေါက်လာပါတယ်။ ၂၀၀၆ ခုနှစ်မှာပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့ Myspace ဆိုတဲ့ Social network ဟာ US မှာတော့ အဆိုပါနှစ်မှာအလွန်ရေပန်းစားခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ ၃ နှစ်ပမာဏလောက်သာပါပဲ။အဲ့နောက်မှာတော့ ၂၀၀၆ ခုနှစ်ဇူလိုင်လ မှာTwitter ပေါ်ပေါက်လာပါတယ်။ ၂၀၁၀ ခုနှစ်မှာတော့ Instagram ပေါ်ထွက်လာပါပြီ။ ၂၀၁၁ ခုနှစ်မှာ Image messaging application ဖြစ်တဲ့ Snapchat ပေါ်ပေါက်လာပြီး ယခုအချိန်ထိရေပန်းစားဆဲပါ။ ၂၀၁၈ ခုနှစ်မှာတော့ Virtual Reality, Live Video နဲ့ 360 Degree Video အပြင်အခြားသော Video Content တွေဟာ Social Media Channel တွေဖြစ်တဲ့ Facebook, Twitter နဲ့ Instagram တို့မှာ ရေပန်းစာလာ ပါတယ်။ နောင်အနာဂတ်မှာလဲ ဘယ်လို Social Media Channel တွေပေါ်ထွက်လာဦးမလဲ စောင့်ကြည့်ကျရဦးမှာပါပဲ။
Posted by Min Thuta/ Thursday February 7th, 2019/ Blog/0Comment